N’izu a ka m gụchara ihe Na-akwado Asụsụ Nne: Site na Olde Bekee ruo Email, Akụkọ Na-adịghị Agbanwe nke Nsụgharị Bekee by David Wolman.
O nwere ike ị gaghị ama ihe ederede na etymology bụ na ọ dị mma. Amaara m na m bụ onye na-egbu nri ụtọ asụsụ na nsụpe, mana akwụkwọ a mere ka m nwee mmetụta nke ịka nka. E nwere ọtụtụ nde okwu n'asụsụ Bekee, mana nkezi ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị maara banyere 60,000. Nke bu eziokwu bu na otutu n’ime anyi amaghi ihe otutu okwu no n’asusu anyi!
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi na anyị na-echepụta okwu ọhụụ ka anyị na-aga, ọ dị mkpa ka ị leghachi anya azụ n'oge OK…. ma ọ bụ nke ahụ dịkwa mma… Ma ọ bụ nke ahụ bụ oll korrect or ole kurreck. Chee echiche, ụmụ ụmụ gị nwere ike ịnwe akụkụ nke mkparịta ụka ha kwa ụbọchị, rofl, lmao, asap, lol, ttfn.
Ekwetaghị ya? Kedu maka okwu a Scuba, nke bụbu aha nnabata maka Ngwaọrụ Na-eku ume Onwe Gị. Kedu maka blog, nke na-erughị afọ iri gara aga Ihe ndekọ weebụ! Site na okwu biara blogger, blogged, blogging na blogware. Ọ bụ oge na-atọ ụtọ ọfụma n'ihi na ọtụtụ n'ime okwu, acronyms ma ọ bụ koodu dị mkpirikpi a na-eme na ntanetị taa na-eji mba ụwa.
Nakwa, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka mgbasa ozi na ịzụ ahịa anaghị eso iwu nke usoro ọdịnala. Anyị nwere ụlọ ọrụ dịka Google, ihe dịka iPhone na ngwaahịa dị ka Seesmic nke anabatara kpamkpam - mana anyị enwechaghị ndidi maka mperi na mberede na ọdịnaya nke anyị. Echere m na ọ na-adọrọ mmasị.
Aga m agba gị ume ka ị bulie otu akwụkwọ, ọ bụ njem na-atọ ụtọ n'akụkọ ihe mere eme. David mere ka ọgụgụ akwụkwọ a dị mfe. Ọbụna ihe na-atọ ụtọ bụ na ọ na-akọ mmalite niile nke Bekee ka ya onwe ya, na-eleta ebe ha gbanwere. Ọ bụ nnukwu ọgụgụ!